တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်တင်ရေးသမားတစ် ဦး ပြောပြသည့် သားပိုက်ကောင်လေးများအကြောင်း - ONE DAILY MEDIA
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်တင်ရေးသမားတစ် ဦး ပြောပြသည့် သားပိုက်ကောင်လေးများအကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဥ်က ကသူတစ်ပါးကိုကယ်တင်ဖို့ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတ္တိရှိတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအကြောင်းပုံပြင်တွေဖတ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ကကိုယ်ပိုင်ဘဝဇာတ်လမ်းရဲ့ သူရဲကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ဖူးခဲ့ကြပါတယ် ။
ထို့အတူပင် Ally Burguieresဆိုသူ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လှုပ်ရှားသူ ItsMeSesame Instagram ပိုင်ရှင်ဟာ opossums ဟုခေါ်သော သားပိုက်ကောင်ငယ်များကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းအသိပညာပေးခြင်းအတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ နှလုံးသားကိုအရင်းတည်ပြီး ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့ကြင်နာမှုဟာ တကယ်ကိုအံ့သြသွားစေပါတယ်။
(၁) Opossums များ၏နူးညံမှုတစ်ဖက်ခြမ်း
Opossums များဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခြံနောက်ဖက်များတွင် ရှိနေနနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ဟာ ပိုးမွှားများမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့သင့်ကြား ယုံကြည်မှုတစ်ခုရရှိသွားတဲ့အခါ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နူးညံ့ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ သဘာဝကိုသင်မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Ally ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ opposums မျိုးစိတ်များအား လူတို့အမြင်ပြောင်းလဲလာ‌စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။သူမ၏အဆိုအရ opossum ကို ချစ်မိသူတစ်‌ ယောက်ပိုတိုးလာလေ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်လေးများအပေါ် ကမ္ဘာကြီး၏ကြင်နာမှု ပိုတိုးလာလေဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာကတော့ Opossums များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလိုက်လံရှာဖွေနေသူများရှိနေပါတယ်။
Opossums များဟာ လူများ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမိသွားသည့်အခါ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအမြဲမချနိုင်တော့ပါဘူး။ Opossum များကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်မထားသင့်ပါဘူး။
ဒဏ်ရာရနေသော opossum ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ရန်မလွယ်ကူတာကြောင့် တတ်ကျွမ်းသည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသမားများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးရပါမယ်။
သူတို့ဟာ ဒီသတ္တဝါလေးတွေ အတွက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေးနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
Opossum များဟာ ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့ဟာ ပြည့်စုံသောဘ၀ကို သက်တမ်းစေ့ ရှင်သန်နိုင်ရန် ရုန်းကန်ရပါတယ်။ ။
ထို့ကြောင့် လိုအပ်သော အကူအညီများကို Ally နဲ့သူ့အဖွဲ့ကကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
သူမဟာ သူတို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့နဲ့ ဘယ်လောက်တူညီမှုရှိလဲ ဆက်နွယ်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Sesame နှင့်သူ၏ အဖွဲ့ဝင်များက opossums များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေရုံသာမက တိရစ္ဆာန်အားလုံးတို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်မှု၊ ဂရုစိုက်မှုနှင့်အကာအကွယ်ကိုရထိုက်သည်ဟူသော အသိအမြင်ကို ဖွင့်ဟပေးခဲ့ပါတယ်။
ခြုံငုံ ပြောရလျှင် ချစ်စရာမကောင်းသော တိရိစ္ဆာန်များသည်ပင် အချစ်ခံရရန်ထိုက်တန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသားကို ဖွင့်ဟ၍ အကောင်းမြင်တတ်ပေးရမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ပုံကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်မလဲ ?? တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုကယ်တင်ဖို့ ရော သင်ကူညီဖူးပါလား ??
ထူးခြားလက္ခဏာရပ်များပါရှိ‌သော အိမ်မွှေးတိရိစ္ဆာန် (၁၈) ကောင်